Khatarta ka dhalan karta Saamiqaybsiga Dekedda Berbera – Dawladnimo News
Home » Wararka » Bariga Afrika » Khatarta ka dhalan karta Saamiqaybsiga Dekedda Berbera
Khatarta ka dhalan karta Saamiqaybsiga Dekedda Berbera
Shirkaddii loo yaqiinnay British East India Company, waxaa ay ahayd tii horseeday markii dambe gumaysigii loo bixiyey “British India”. Taariikh ahaan ku dhawaad labo boqol oo sano ayey dalka si dadban ama aan toos ahayn u gumaysanaysay, ugu dambayn se 1857-dii ayaa boqoradii Ingiriiska ee Queen Elizabeth1 ku dhawaaqday dhulka cusub ee boqortooyada toos u hoos yimaada ee Hindiya. Ogow oo kolkii shirkaddu imaanaysay dhulka Hindida waxaa ay ku soo gashay sifo ganacsi oo caadi ah, bal se markii dambe waxaa ay isu beddashay in ay qaybiso Hindidii iyo in ay qaar ka dhigti Kiristaan kuwaa oo cadow u arkaya kuwa diimaha kale rumaysan! Ogow dadkaa la gumaystay juhalo aan waxba aqoon ma ahayn ee dowlado waawayn oo saamayn lahaa ayaa ka jiray gaar ahaan dowladdii loo yaqiinay Mughal Empire. Waa haddii aad ku fakarayso in dad cawaan ah Ingiriisku iska qabsaday!
Taariikhdaani waa mid dheer oo aan qoraal hal mar ah lagu koobi karin, laakiin ganacsiga la soo mariyo ficillada duudsiga iyo quursiga ku dambeeya adduunka dhowr boqol oo sano ka hor ayuu ka dhacay. Ujeedooyinka koobaad ee uu fuliyaa waa in la kala dilo dadka markaa loo tagayo, oo la kala dillaalo, midba kan kale loo tuso in uu cadowyahay, kadibna kolka ay isku mashquulaan laga danaysto la na dulleysto.
Saamiga Itoobiya ku yeelanayso Dekedaha Soomaalida ee badda cas kama duwana ka qaybgalkii Itoobiya ka qaybgashay shirkii Baarliin ee gumaystayaasha reer Yurub ku qaybsanayeen qaaradda Afrika. Waa markale oo Itoobiya muujineyso dowladnimadeeda iyo xaddaaraddeeda oo ay leedahay wallaahay baanaan ka qadayn barwaaqada Carabi guranayso annaga oo daris la ah, waa taas qaadatay qaybteedii, cadkeediina bannaanka loo dhigay.
DP WORLD waxa ay rabaan in ay matalaan filin reer galbeedku horey u soo jilay oo cid hadda gashaa aysan jirin, laakiin ha loo sheego dadkaani waa kici doonaan, waana iska kiin dhicin doonaan!